VFX Legion သည်“ အမေရိကကိုတည်ဆောက်သည့်အစာ” အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖန်တီးပေးသည်။ History Channel ၏ Docudrama Mini-Series အသစ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » VFX ကို Legion of Honour '' အမရေိတည်ဆောက်သောစားနပ်ရိက္ခာ, '' သမိုငျး Channel ကိုဖွင့်နယူးဒိုးကုဒရမ်မာများ Mini ကို-စီးရီးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
VFX ကို Legion of Honour '' အမရေိတည်ဆောက်သောစားနပ်ရိက္ခာ, '' သမိုငျး Channel ကိုဖွင့်နယူးဒိုးကုဒရမ်မာများ Mini ကို-စီးရီးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
VFX Legion မကြာသေးမီက, သမိုင်း Channel ကိုအသစ်ဒိုးကုဒရမ်မာများ Mini-စီးရီးအတွက် 'အမရေိဖန်ဆင်းသောစားနပ်ရိက္ခာ။ ' အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးရောနှောပြီးစီး အဆိုပါ Burbank-based ကုမ္ပဏီစတင်ထံမှ finish ကိုမှ, ထုတ်လုပ်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဆင့်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အဖွဲ့သည်နယူးယောက်, ထုတ်လုပ်မှု၏ဆယ်တနာရီအချိန်၌စဉ်အတွင်းတာဝန်ပေးဖွင့်လှစ်မယ့်ပြပွဲ၏နောက်ဆုံးပေးပို့မှတဆင့်သမျှသောလမ်းထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းစုံစမ်းနေကြပြီနှင့် On-set နေရာများတွင်စဉ်အတွင်း On-site ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောမီလ်တန် Hershey, ယောဟန်နဲ့ Will Kellogg ဟင်နရီ Heinz, CW Post ကို, အမက်ဒေါ်နယ်ကညီအစ်ကိုတွေအဖြစ် - - ထိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နည်းပညာကိုတီထွင်တဲ့သူက New York ထဲက Lucky 8 ထုတ်လုပ်, 'အမရေိတည်ဆောက်သောစားနပ်ရိက္ခာ' 'အမြော်အမြင်များ၏ဇာတ်လမ်းများကိုပြောပြ သောအစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းတော်လှန်ခြင်း။ အဆိုပါဒိုးကုဒရမ်မာများအစက်အပြောက်-အပေါ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူကာလ၏အသွင်အပြင်ပုံတူပွားကြောင်းသိသိသာသာများမှာပြန်လည်သရုပ်ဖော်ပုံများကို အသုံးပြု. ရာစုနှစ်၏အလှည့်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အချက်အပြုတ်ရှုခင်း၏ reshaping တွင်ဤဖို့အတွက် Titans တွေက '' အခန်းကဏ္ဍရေးမှတ်ထားခြင်း။
VFX Legion ရဲ့အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုတာဝန်များကိုများထဲတွင်တစ်ဦးကသွားကြောင်းခေတ်ကနေသိုလှောင်ရုံများနှင့်စက်ရုံများထပ်ဖွအကြီးစား set ကို extenstion နဲ့ကျြမှောကျခတျေအဆောက်အဦမှထွက်တည်ဆောက်ခြင်းခဲ့သည်။ Legion မူလကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သည့်ပန်းကန်အဆိုပါ Hershey စက်ရုံချွတ်ပြပါနဲ့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားသာချက်မှရှုခင်းပတျဝနျးကငျြကိုမရသောအခါအခြားစိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အရှိန်မြှ။ မြေပြင်ကိုတက်ကနေ - ၎င်း၏အဖွဲ့သည်စက်ရုံကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာကျယ်ပြန့်ရှုခင်းတစ်ခုအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံတူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရိုက်ချက်ကာလဗိသုကာများ၏စတိုင်လ်အဖြစ်စီးရီး၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ခံစား recreated ။
ကံ 8'' s ကိုကို Creative ဒါရိုက်တာ Yoshi ကျောက်ခေတ် Legion ရဲ့ LA ကခုနှစ်မှာအိမျ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးမဿဲလင်းနှင့်ကို Creative ဒါရိုက်တာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့
ဂျိမ်း Hattin ။ သူတို့ဟာ VFX Legion ရဲ့နယူးယောက်အခြေစိုက်တွင်-Set Supervisor အဲရစ် Pascarelli တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကင်းထောက်အစည်းအဝေးများအပေါ် အခြေခံ. စုံ၏အသွင်အပြင်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အညွန့်နေစဉ်အတွင်း Lucky 8 ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းနှင့်အလုပ်လုပ်, Pascarelli သူတို့ကရိုက်ချက်များ Burbank ပြန်လိုအပ် Legion ရဲ့အနုပညာရှင်တွေခဲ့တာသေချာပါစေတော်မူ၏။ သူကထောက်ပံ့ပေးကြောင်းချင်းစီရိုက်ကူးခြင်း၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်တိုင်းတာသူတို့ညာဘက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိထိရောက်ရောက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု၏ပတ်လည်လှည့်နိုင်ခဲ့ရရှိနိုင်မည်။ VFX Legion ထုတ်လုပ်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဆင့်ကာလအတွင်းပူးပေါင်းမှန်ဘီလူး video conferencing အသုံးပြုသောနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအစီအစဉ်ကိုကူးသွားနှင့်အပေါ်အသင်းများကြောင်းသေချာစေရန် နှစ်ဦးစလုံးကမ်းရိုးတန်းတူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်အမြဲရှိကြ၏။
ဂိမ်းထဲမှာနှောင်းပိုင်းတွင်, Lucky 8 ဟုမေး VFX Legion ပြပွဲဖွင့်လှစ်ဂရပ်ဖစ်အထုပ်ကိုဖန်တီးရန်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကုသမှုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံး၏ဒီဇိုင်းများနှင့်စတိုင်များ၏နံပါတ်စားခန်းချကြ၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ LA ကအဖွဲ့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲနှင့်ပွင့်လင်းကာတွန်းကားများနှင့်က client ကိုရဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးဒဏ်ငွေ-ညှိ။
" 'အမရေိတည်ဆောက်သောစားနပ်ရိက္ခာ' ' ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ် fixed ကုန်ကျစရိတ်ပြပွဲခဲ့, "Hattin, Legion ရဲ့တည်ထောင်သူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မှုကြှနျတျောတို့၏ရှေ့ဆောင်ပိုက်လိုင်းများနှင့်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်ချဉ်းကပ်ကိုင်တွယ်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြောင်းလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်မျိုးလိုအပ်သည်။ "
"Lucky 8, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုဂုဏ်သိက္ခာတန်းစီဇယားထုတ်လုပ်မယ့်တစ်ဦးက New York-based ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒိုးကုဒရမ်မာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်, ကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံခဲ့," Hattin ကထပ်ပြောသည်။ "သမိုင်း Channel ကို captivate ကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဒိုးကုဒရမ်မာများတစ်ဆက်လိုင်း-အထိနေရာဖြစ်သည်နှင့်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကိုပြောင်းလဲနေသောပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်အတူပရိသတ်တွေဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်။ Legion ရဲ့အဖွဲ့ကယ့်ကိုပျော်မွေ့နှင့်ဤအမျိုးအစားမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးထား။ "
VFX ကို Legion of Honour 3D တင်ဆက်မှုများအတွက် Redshift သော, မှုန်ပန်းချီဘို့အတွက် Adobe Photoshop ကို, ဖွဲ့စည်းမှုသည် Foundry ရဲ့နျူကလီးယားအပါအဝင်စီးရီးများအတွက်ရိုက်ချက်များကိုဖန်တီးရန်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုရောနှောအသုံးပြုခဲ့ Autodesk'' s ကိုစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သေနတ်များ, Autodesk'' s ကို 3D အလင်းရောင်နှင့်ကာတွန်းများအတွက်မာယာ, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု / Illustrator ပြီးနောက်ကို Adobe သုံးပြီးဖန်တီးခဲ့ခြင်းနှင့် Signiant မီဒီယာ Shuttle ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
VFX Legion LA က / ဘီစီနှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများ, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် www.VFXLegion.com, 818-736-5855, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ကဖုန်းဆက်ပါ [အီးမေးလျ protected].
ခေါင်းစဉ်: 'အမေရိကတည်ဆောက်သောစားနပ်ရိက္ခာ' '
အမျိုးအစား: Mini ကို-စီးရီး / ဒိုးကုဒရမ်မာများအဘို့ VFX
Airdates: သြဂုတ်လ 11-13 / သမိုငျး
client: သမိုင်း Channel ကို / က NYC
အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ: ဂျင်မ် Pasquarella
အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ: မာရိသညျအီး Donahue
Programming ၏အလုပ်အမှုဆောင် VP နဲ့ဌာနမှူး: ဧလိ Lehrer
ဖြူး: A + E ကိုကွန်ယက်
Lucky 8 / NYC by: ထုတ်လုပ်
အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ: Yoshi ကျောက်ခေတ်, Greg ဟင်နရီကင်မ် Woodard, ဣဇာက် Holub
VFX Legion / LA က, ဘီစီ by: Visual Effects
ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ: ဂျိမ်းဒါဝိဒ်သည် Hatting
VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး / Show ကိုဖွင့်ပါ: မဿဲတီလင်း
on-သတ်မှတ်မည် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး / နယူးယော့: အဲရစ် Pascarelli
3D ကြီးကြပ်ရေးမှူး: Rommel အက်စ် Calderon
CG Dynamics ကို: အဲရစ် Ebling
ဖွဲ့စည်းမှု: နစ်ခ် Guth
ဖွဲ့စည်းမှု: Brad Moylan
ဖွဲ့စည်းမှု: Eugene Olsen
ကင်မရာခြေရာကောက်: Guy Delgado
ပိုက်လိုင်း Tools များ: Brandon Rachal
မက်တီပန်းချီ: မာ့ခ် Adamson
မက်တီပန်းချီ: ခရစ်ယာန် Haley
မက်တီပန်းချီ: ဂျင်မ် Hawkins က
မက်တီပန်းချီ: အဲရစ် Mattson
မက်တီပန်းချီ: Yvonne Muinde
VFX ညှိနှိုင်းရေးမှူး: Lexi Sloan
VFX ညှိနှိုင်းရေးမှူး: မန်ဒါ VanDeCar
စာရင်းကိုင်: Michaela O 'Brien
SJ ရွှေအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
VFX Legion၊ ရှေ့ဆောင်အဝေးမှပိုက်လိုင်း၏ဗိသုကာသည် Covis အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည် - ဧပြီလ 15, 2020
DB Sweeney ၏ဟာသ 'Dum Micks' တိုတိုကိုကိုလိုနီ၏ Keith Kristinat Sweeps Film Festival Circuit မှတည်းဖြတ်သည်။ - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2020
Colonie သည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောဂျနီဖာဂါဒါအား၎င်း၏အရောင်သတ်မှတ်ရေးဌာနအသစ်သို့ ဦး ဆောင်သည် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို VFX fim များအတွက် VFX တီဗီများအတွက် VFX VFX Legion 2019-08-13
ယခင်: IBC2019: နယူးဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions ပံ့ပိုးမှု 4K စတူဒီယိုများအတွက် Workflows နှင့်မိုဘိုင်း Applications ကို
နောက်တစ်ခု: Tedial ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်အဖြစ် Named ဂျူလီယန်ဖာနန်ဒက်ဇ-Campon